कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, २८ माघ
सोमबार अपराह्न १२ बजेको थियो । एउटा अपत्यारिलो घटनाको सूचना आयो । घटना ललितपुरको सानेपास्थित पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीकी श्रीमतीको हत्या र उनकै घरमा काम गर्ने एक युवा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको भन्ने थियो ।
सूचना पाएलगत्तै ललितपुर प्रहरी परिसरका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सन्तोष तामाङसँग घटनाबारे बुझेँ । तामाङले सूचनालाई पुष्टि गरिदिए ।
यति दर्दनाक घटना सानेपामै घटेको खबर पुष्टि भएपछि म र केही साथी अर्जुन कार्कीकै घर सानेपा पुग्यौँ ।
जाँदा बाटो नचिनेका कारण केही समय अलमलमा परेँ । कार्कीको घर पुग्दा करिब १ बजिसकेको थियो । घर आलिसान थियो । घरको चारैतिर कम्पाउण्ड राखिएको थियो ।
सेतो रङ लगाइएको घरको केही भागमा पहेँलो रङले शोभा बढाएको थियो । तर, सन्नाटा छाएको थियो घर वरिपरि । घरमा कोही नयाँ मान्छे आउँदा भुक्ने कुकुरले समेत भुक्न छाडिसकेको थियो ।
खैरो रङको पाइन्ट, खरानी रङको स्विटर र कालो चप्पलमा अर्जुन कार्की घरको ढोका अगाडि सेतो कुर्सीमा अर्धचेत अवस्थामा बसिरहेका थिए ।
उनी रोइरहेका थिए । कराइरहेका थिए । खुट्टा बजारिरहेका थिए । कारण, उनकी श्रीमती मुनाको दर्दनाक हत्या भएको थियो ।
उनकी श्रीमती मुनाको शव भने सानेपाकै स्टार अस्पतामा राखिएको थियो । घरको भान्साकोठामै हत्या गरिएकी मुनालाई प्रहरीले अन्तिम श्वास बाँकी छ कि भन्ने आसले अस्पताल पुर्‍याएको थियो । तर, अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरिदियो ।
अर्जुन रुँदै भन्दै थिए, ‘श्वास मात्रै पनि बाँकी भइदिएको भए राम्रो अस्पतालमा लगेर बचाउँथे ।’
तर, उनको श्वास बाँकी थिएन । मुनाले यो दुनियाँ छाडिसकेकी थिइन् ।
१ छोरा, २ छोरीसहितको सुखी र सम्पन्न परिवारमा आफ्नै घरमा काम गर्न करिब ११ वर्ष पहिलेदेखि राखेका विजय चौधरी उनको परिवारमा बज्रपात बनेका थिए ।
अर्जुनका २ छोरीमध्ये १ बेलायत र १ जना अस्ट्रेलिया पढाइका लागि गएका छन् । घरमा भने १२ वर्षीय छोरा, अर्जुनकी श्रीमती मुना कार्की र विजय चौधरी बस्थे ।
उनै चौधरीले मुना भान्सामा काम गरिरहेका बेला पछाडिबाट डोरीले घाँटीमा बाँधेर र टाउमा प्लास्टिकको पिर्काले हानेर हत्या गरेको अनुमान प्रहरीको छ । हत्यालगत्तै उनले समेत झुण्डिएर आत्महत्या गरे भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिए पनि कारण भने अझै केही खुलेको छैन ।
हामी अर्जुनको घरमा पुग्दा चौधरीको शव घरभित्रै थियो । पहिलो तल्लाबाट दोस्रो तल्ला उक्लिने भर्‍याङमा नीलो रङको नाइलनको डोरीमा झुण्डिएर उनले आत्महत्या गरेको प्रहरीले प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ ।
डोरी भने चौधरीको भार थाम्न नसकेर चुँडिएको भनिएको छ । डोरी चुँडिनुअघि नै उनको मृत्यु भइसकेको अनुमान प्रहरीको छ ।
रुँदै छोरीलाई फोन
घटना थाहा पाएलगत्तै अर्जुन कार्कीको घर पुगेका हामीले करिब ३ घण्टा त्यहीँ बितायौँ । अर्जुनका आफन्तले उनलाई सम्झाउने कोसिस गर्दै थिए ।
अर्जुन कहिले अरूले भनेको कुरा सुन्थे एकैछिनमा आफैँ बर्बराउँथे । भन्थे, ‘जिग्दगी बर्बाद भयो, के पाप गरेको रहेछु । म पापी रहेछु ।’
त्यही समय अस्ट्रेलियामा रहेकी अर्जुनकी छोरीको फोन आयो । फोन उनको आफन्त कसैको मोबाइलमा आएको थियो । बोल्न अर्जुनलाई नै दिए । अर्जुन रुँदै भन्दै थिए, ‘बाबा, आजै काठमाडौं आऊ, बहिनीलाई पनि त्यही भन, मामुलाई गाह्रो भयो, आजै आऊ ।’
विश्वास रहेन भगवान्‌मा
अर्जुन कार्की सोमबार बिहान ८ बजे नै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएका थिए । पशुपतिनाथसँग परिवारमा सुख, शान्ति र दीर्घायुको कामना गरेर फर्किएका उनी ११ बजेर २० मिनेटमा घर पुगेका थिए ।
घर पुग्दा उनको गेट बन्द थियो । घरमा रहेकी श्रीमतीले गेट खोल्छिन् कि भन्ने आसमा उनले बेल बजाए । बेल त बज्यो तर गेट खोल्न कोही आएनन् । न कोही बोले ।
अर्जुनले श्रीमतीको नाम लिएरै ‘मुना–मुना’ भनेरै बोलाए । यति भन्दा पनि नबोलेपछि उनी आफैँले बाहिरबाट हात छिराएर गेट खोले ।
भित्र पुग्दा भर्‍याङमै चौधरीले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको देखे । छाँगाबाट खसेजस्तै भए अर्जुन । त्यहीँबाट फेरि ‘मुना–मुना’ भनेर बोलाए । भित्रैबाट बोलाउँदासमेत मुना नबोलेपछि बाथरुममा होलिन् भन्ने आसले दोस्रो तल्लामा उक्लिए । उक्लिँदै गर्दा उनको होसहवास उड्यो ।
भान्साकोठा रगताम्य थियो । श्रीमती मुना लडिरहेकी थिइन् । रगतले लत्पतिएकी श्रीमतीलाई हल्लाउँदै ‘मुना–मुना’ भनेर बोलाए । तर, मुना बोलिनन् । मुनाले यो दुनियाँबाट अन्तिम श्वास छाडिसकेकी थिइन् ।
अर्जुन बर्बराउँदै भन्दै थिए, ‘मुनालाई कति दुख्यो होला ? कति छटपटाइन् होला ? किन भाग्न नसेकेकी होलिन् ? जोरले कराएको भए छिमेकिले सुन्थे होला ? बचाउँथे होला । त्यो किन गरिनन् ?’
अर्जुनले भगवान्प्रतिको विश्वाससमेत गुमाए ।
अर्जुनले रुँदै आफ्नी श्रीमतीलाई सोधेका प्रश्नको उत्तर उनकी श्रीमतीबाट अब कहिल्यै पाउनेछैनन् । न त मुनाले घरको ढोकाकै छेउमा र्‍याकभरी सजाएर राखेका थरीथरीका जुत्ता र चप्पल नै लगाउन पाउनेछन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६, १०:५५:००